Kunamata Pfungwa Kukomborera Imba Idzva | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Kunongedzera Kukomborera Imba Idzva
Nhasi tichange tichishanda nemunamato zvinongedzo zvekuropafadza imba nyowani. Bhuku raPisarema 127: 1 Kunze kwekunge Ishe vavaka imba, vanoivaka vanoshandira pasina; kunze kwekunge Ishe vachengeta guta, murindi anomuka asi pasina. Ndiishe chete anogona kuvaka imba. Zvichakadaro, iwe unofanirwa kuziva kuti imba mune ino mamiriro hazvireve chete imba inogarwa nevanhu. Zvinoreva zvakare mhuri uye dzinza. Kristu akatidzidzisa manamatiro pese patinopinda mune imba nyowani. Jesu akataura kuti pese patinopinda mumba memumwe munhu tinotiwo rugare ngaruve kuimba ino. Izvi zvinogona kuwanikwa mubhuku raRuka 10: 5 Asi imba ipi neipi yamunopinda, tangai mati: Rugare kuimba ino.
Nekudaro, isu tinoti chii kana isu tiri kupinda mumba medu nyowani kekutanga? Sezvineiwo, isu tichiri kukwanisa kuti munamato rugare ruve kuimba ino. Kana tichiti rugare ngaruve kuimba ino, zvinoreva kuti tiri kukoka Jesu mumba medu. Kristu anoonekwa seMuchinda werunyararo, nguva yatinozivisa chirevo chekuti rugare ngaruve kuimba ino, takakoka Jesu mumba. Zvakadaro, munamato weimba nyowani unopfuura izvo. Kutanga tinoda kutenda Mwari nekuropafadzwa kwemusha mutsva. Uyezve, isu tinonamatira kuropafadzwa kwaMwari Wemasimbaose pamusoro pemba, kuchengetedzwa kwaMwari uye pamusoro pezvese rudo rwaMwari Yese minamato iyi inosanganisira kugara zvakanaka mumba mutsva.
Ishe Jesu, ndinokutendai nekuropafadzwa kwemusha mutsva. Ndinokukudzai nekuti nekuda kwegadziriro yamakaitira iyo yekuzvarwa iyi imba itsva. Ndinokutendai nekuti ndimi Mwari. Ndinokutendai nekusaita kuti tishaye pekugara, ndinokukudzai nekuda kwekugara kwakanaka, zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.
Ishe, ndinokukokai mumba muno. Ndinonamata kuti mweya wako uve unoonekera mumba muno muzita raJesu. Ndinonamata kuti simba raMwari Samasimba rirambe richipenya mumba muno muzita raJesu. Ini ndinouya ndichipesana nemasimba ese erima anogona kutyisidzira runyararo rwemba ino, ndinovatuka nemoto weMweya Mutsvene.
Baba Tenzi, ndimi muchinda werunyararo, ndinonamata kuti muuye muve incharge yeimba ino muzita raJesu. Ndinonamata kuti rugare rwako rurambe ruchigara mumba muno nemuzita raJesu. Simba rega rega nehukuru hunogona kunge hwakatyisidzira kutora imba ino, ndinonamata kuti moto waMwari uvaparadze muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinonamata kuti muise ruzhowa rwemoto kupoterera imba ino muzita raJesu. Maoko enyu ekudzivirira achave pane wese munhu achagara mumba muno muzita raJesu. Bhuku ra Job 1: 10 - Hamuna kumupoteredza here, iye neimba yake nezvose zvaanazvo? Makaropafadza basa ramaoko ake, uye makwai ake nemombe zvipararira nenyika. Ndinonamata kuti iwe uise ruzhowa rwemoto kupoterera imba ino muzita raJesu.
Ishe, ndinouya kuzorwa nerufu nedambudziko, hazvizove nesimba pamusoro peimba ino muzita raJesu. Ndinonamata kuti rufu rurege kuzvitsvakira imba ino muzita raJesu. Chinyorwa chinoti hatingafi asi tichararama tichizivisa mabasa ashe munyika yevapenyu. Ishe ndinonamata kuti hapana nhengo yemhuri iyi ichafa muzita raJesu.
Tenzi, ndinonamata kuti imi mugotipa nemhando chaiyo yehungwaru kuzvisunungura kubva kuzvinhu zvese zvinongounza kunze kwekurwadziwa uye kupererwa mumba medu muzita raJesu. Ishe, ndipei ini nenhengo yese yemhuri ino nyasha dzekukura musimba renyu nesimba.
Ini ndinouya kuzorwa nemhando dzose dzekusawirirana pakati pedu. Chinyorwa chinoti vaviri vangashanda pamwechete kunze kwekunge vabvumirana? Ishe, ndinonamata kuti mutibatsire kusimudzira kubatana pakati pedu muzita raJesu. Nenzira ipi zvayo muvengi akaronga kurwisa kugara pamwe murunyararo pakati pedu semhuri, ndinonamata kuti moto waMwari uuparadze muzita raJesu.
Baba Tenzi, Kristu akatidzidzisa kuti mukuru murairo rudo. Ndinonamata kuti iwe utidzidzise maitiro ekuzvida isu nenzira chaiyo muzita raJesu. Ndinonamata kuti mutipe nyasha dzekuramba tichirarama murudo muzita raJesu.
Ishe ndinozodza zvese uye nemunhu wese ari kufamba neni kupinda mumba muno, handizorasikirwe nemumwe wavo muzita raJesu.
Ishe, ndinokunda murume wese akasimba akapihwa nemuvengi kuti vatitadzise mumba muno. Ndinomutsiura nesimba muzita raJesu. Ndinonamata kuti murume akasimba akadai arasikirwe nemasimba ake muzita raJesu. Kutaurirana kwese kwemadhimoni kuri kuitika mumusha uno kupokana nesu vagari vepo, ndinodana moto waMwari pamusoro pako nhasi muzita raJesu. Ishe, mudzi wese wakaipa wakasimwa muvhu remba ino kukonzera kudzoka kana kutambudzwa nemadhimoni, ndinonamata kuti simba raMwari rivadzure nhasi muzita raJesu. Tenzi, chero chinhu chiri mumba muno chinokonzeresa kugara murunyararo kwemhuri yangu neni, tora moto nguva ino muzita raJesu.
Ishe, vageremo vese vakaipa vakapihwa nemuvengi kukanganisa rugare rweimba ino, vafe nhasi muzita raJesu. Ini ndinopfiga musuwo weiyi gonhi kupesana nevagari vese vakaipa muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kukomborera Mota Nyowani
inoteveraKunamata Pfungwa Kukunda Kushushikana SeMutendi
traore salimata Chikunguru 31, 2021 Na7: 53 pm
moi je suis traore salimata et je suis de la côte d'Ivoire, je suis is issu d'une famille musulmane mais je me suis convertit à la religion
cela fait 6 ans qu il soufre d une plaie isingarapike uye moi aussi il ya des esprits de nuits qui me kuneta nous avons beaucoup tourné et sans rien et j'ai vu vos prières sur la spirituelite qui m édifié si vous recevez mon message j 'ai vraiment besoin de vos prières pour moi et ma famille merci
admin vashandi Nyamavhuvhu 2, 2021 At 7:21 am
Unogona kutaura neni kuburikidza neWhatsApp pamutsetse uyu 0703 253 3703